Kuwait iyo Qatar oo ku biiray dalalka Khaliijka ee xayiraada saaray Lubnaan | shumis.net
Home » News » Kuwait iyo Qatar oo ku biiray dalalka Khaliijka ee xayiraada saaray Lubnaan
Kuwait iyo Qatar oo ku biiray dalalka Khaliijka ee xayiraada saaray Lubnaan
Wadamada Kuwait iyo Qatar ayaa iyaguna ugu baaqay shacabkooda inaysan tagi wadanka Lubnaan oo xayiraad baaxadleh kala kulmay todobaadkan dalalka Khaliijka.
Sacuudiga, Imaaraatiga iyo Baxreyn ayaa Arbacadii shalay shaaciyey in muwaadiniintooda tagin wadanka Lubnaan, waxaana taasi u dheer Boqortooyada Sacuudiga oo joojisay dhaqaalihii gaaraya $4 Bilyan oo dollar oo ay ku kabi jirtay ciidamada militariga Lubnaan.
Cadaadiska dalalka Khaliijka ay dul dhigeen dowlada Lubnaan ayaa la xariirta kaalinta kooxda Xisbullah ee Lubnaan saldhigeedu yahay ay ku leedahay dagaalka ka socda wadanka Siiriya. Xisbullah ayaa kamid ah xoogaga gacanta ka siinaya Xukuumada Bashar Al Assad dagaalka ka socda wadankaasi.
Dowlada Lubnaan iyo siyaasiyiin badan oo kasoo jeeda Lubnaan ayaa Arbacadii shalay walaac weyn ka muujiyey xayiraada ay dalalka Khaliijka kusoo rogeen wadankaasi oo ay sheegeen in dhaawac weyn ku keeni doonto amnigooda iyo dhaqaalaha wadankaasi oo si weyn ugu xiran wadamada Khaliijka.
Balse Xisbiga Xisbullah ee Shiicada ah ayaa soo dhaweeyey in dalka Sacuudiga u faraha kala baxo siyaasada Lubnaan, waxayna sheegeen inay sii wadi doonaan taageerada ay siinayaan xukuumada Siiriya ee Bashar Al Assad iyo waliba Dowlada IRAN.
Shacabka Lubnaan ayaa iyagu aaminsan inay dhexda u galeen dagaalka u dhaxeeya Sacuudiga iyo IRAN oo iyagu kala taageera xisbiyada siyaasada ee wadanka Lubnaan, dalkaasi oo muddo 2 sano ah aan lahayn Madaxweyne kadib markii xisbiyada ku heshiin waayeen magacaabida Madaxweynaha.
Sacuudiga oo horey u bixin jiray inta badan dhaqaalaha militariga Lubnaan ayaa xiligan si weyn uga careysan in ciidamada wadankaasi horjoogsan waayeen maleeshiyaadka Xisbullah ee u gudbaya dalka Siiriya, dhaq dhaqaaqa shiicada Lubnaan ee Xisbullah ayaa iyagu ah xisbi rasmi ah oo dalkaasi ka jira isla markaana leh awood militari oo ka madax-banaan Xukuumada wadankaasi.
Title: Kuwait iyo Qatar oo ku biiray dalalka Khaliijka ee xayiraada saaray Lubnaan